WordPress - သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး Martech Zone
WordPress - သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
ကြာသပတေးနေ့, ဧပြီ 5, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
နောက်ဆုံး ရက်အနည်းငယ် ငါ့သူငယ်ချင်းကောင်း Pat Coyle ၏ဘလော့ဂ်ကိုပြန်သိမ်းဆည်းရန်ငါစိတ်ဆိုးစွာဖြင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ (ကျွန်ုပ်၏အားလပ်ရက်သည် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်။ ယနေ့--ပြီလတွင်အနည်းငယ်နှင်းကျနေသည်။ Global Warming မည်သို့ဖြစ်သွားသနည်း?)
A DNS ကို ဆာဗာ fritz အပေါ်သွား၏။ က DNS ကို ဆာဗာသည် ၀ င်လာနေသောအသွားအလာကိုဒိုမိန်းအမည်သို့ဘာသာပြန်ပြီးသင့်လျော်သောဆာဗာသို့ပြန်ပို့သည်။ ၎င်းဖြစ်ပျက်မှုနှင့်အတူ၎င်းသည်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်း ၂ ခုခွဲထုတ်ခဲ့သည် - ဆိုဒ်ဒိုမိန်းနာမည်နှင့်ဆိုက်ကိုဒေတာဘေ့စ် (သူ၏ဒေတာဘေ့စ်သည်လက်ရှိတွင်မျှဝေထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသည်) ။
သူ့ blog ကိုအခြား server တစ်ခုသို့မြန်မြန်ရွေ့လျားခြင်းဖြင့် DNS ပြwasနာရှိနေသည်ကိုမသိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ ဤသည်အခြားရှုပ်ထွေးသော၏အဆင့်ထပ်ပြောသည်။ WordPress ရှိစကားဝှက်များ (နှင့်အခြားဒေတာဘေ့စ်အပလီကေးရှင်းများ) သည်၎င်းတို့ဆာဗာမှထူးခြားစွာစာဝှက်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဆိုဒ်ကိုအခြားဆာဗာတစ်ခုသို့ရွှေ့မည်ဆိုပါကသင်၏စကားဝှက်ကိုစာဝှက်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုသာသင်ပိတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာ၊ WordPress (အခြားထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ချက်တစ်ခု) တွင် Password ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်သည့်အီးမေးလ်ရှိ link တစ်ခုမှစကားဝှက်ပြန်လည်ရယူခြင်းစနစ်ရှိသည်။
ဒီလိုမျိုးမဖြစ်ခင်၊ ငါဟာပြည့်စုံတဲ့ backup တွေကိုလုပ်ပေးတဲ့စိတ်ကူးရှိတဲ့ web hosting ကုမ္ပဏီတခုခုနဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောရမယ်။ ငါသူတို့ backups မှတဆင့်ပြင်ဆင်ရန်နိုင်ခြင်းမရှိသောပြanနာရှိခဲ့ဖူးဘူး။ သူတို့ရဲ့ဘလော့ဂ်များနှင့်ဆိုဒ်များမှာလုံးဝပျောက်ဆုံးနေကြောင်းအခြားရှေးရှေးများထံမှအိပ်မက်ဆိုးများကိုငါကြားခဲ့ရသည်။ ဒါကိုဘယ်လိုဖြတ်သန်းရမယ်ဆိုတာကိုငါစိတ်ကူးလို့မရဘူး။ (ကျွန်ုပ်၏ RSS feed ကိုစာရင်းသွင်းပါ သင်သည်ငါ့အိမ်ရှင်နှင့်အခမဲ့နှစ်တစ်ကူပွန်ရယူနိုင်သည်။
ဝက်ဘ်ဆာဗာကိုကျွန်တော်ဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ် တယောက်က FTP နှင့်ဆိုက်နှစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ရယူပါ နှင့် ဒေတာဘေ့စ။ ကျွန်ုပ်၏ hosting package ၏နောက်တစ်ခုကကျွန်ုပ်တစ်ခုလုံးကိုရယူနိုင်သည် VDS အမှန်တကယ်ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုယ်နှိုက်ထက်ကျော်လွန်။ MySQL သည်ဒေတာဘေ့စ်များကိုဖိုင်တွဲတစ်ခု (/ var / lib / mysql /) တွင်သိမ်းဆည်းသည်။ ငါ local directory ကိုကူးယူခြင်းဖြင့်ရိုးရိုးဒေတာဘေ့စ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်ခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ backup တခုကိုပြောပါ။ တင်ပို့မှုမရှိ၊ တင်ပို့မှုမရှိ၊ အမြင့်ဆုံးဖိုင်အရွယ်အစားမရှိပါ။
အခုတော့ဆိုက်နှင့်ဒေတာဘေ့စ်ကိုဒေသခံတွေထားရှိပြီဆိုတော့သက်သာရာသက်ပြင်းချလိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်ဒီမှာရပ်ပြီးစိတ်ရှည်သည်းခံမယ်ဆိုရင် DNS ပြissueနာကသူ့ဟာသူဖြေရှင်းသွားမှာပါ၊ Pat လည်းစောစောပြန်လာလိမ့်မယ် ကျွန်ုပ်ဒိုမိန်းအမည်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်အသုံးချမည့်သင့်လျော်သောအမည်ဆာဗာများကိုညွှန်ပြနေဆဲဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည် Whois.net။ သင်သည်သင်၏ဒိုမိန်းကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါက name server များသည်အစီရင်ခံစာ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသည်။
ဒါကဒီ site ကို hack နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်စေတယ်။ ဆာဗာအမည်မှန်တယ်၊ ဒါပေမယ့်တက်လာတဲ့စာမျက်နှာက spam နဲ့တူတဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့စာမျက်နှာအချို့။ ငါအသုံးချ တိုက်ရိုက်ခေါင်းစီးများ add-on လူများစွာမြင်တွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ hack - ငါတကယ်လမ်းကြောင်းပြောင်းမပေးတာသေချာအောင် Firefox ကိုသွား။ ဒီဆိုဒ်ကိုြပန်လည်မရရှိခဲ့ပါ။ ငါအပိုဆောင်းပြeshနာဖြေရှင်းလုပ်ပါပြီ ဒါပေမယ့်ကျွမ်းကျင်သူတွေကစပြီးစုံစမ်းနိုင်အောင်ကျွန်မရဲ့အိမ်ရှင်နဲ့အထောက်အကူလက်မှတ်ရခဲ့တယ်။
Pat ကိုနောက်ဆုံးပေါ် WordPress 2.1, PHP, နှင့် MySQL ဗားရှင်းအသစ်များကိုကျွန်ုပ်မွမ်းမံနိုင်သေးပါ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအချိန်မရှိဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါကသူ့အကောင့်အဟောင်းကိုဖျက်ပစ်နှင့်အသစ်တစ်ခုအကောင့်ဖွင့်လှစ်။ ငါသည်သူ၏အီးမေးလ် alias ကိုသတင်းအချက်အလက်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ဒေတာဘေ့စတင်ခဲ့သည်, WordPress ၄.၇ နှင့် Pat ၏အကြောင်းအရာ
wp-content upload directory - သင်၏တင်ထားသောပုံအားလုံးသည်နေရာဖြစ်သည်။
wp-content plugins လမ်းညွှန် - သင်၏ plugins အားလုံး (ဗားရှင်းပြissuesနာများရှိနိုင်သောကြောင့်ဒီကိုနောက်ဆုံးလုပ်ပါ)
wp-content themes များလမ်းညွှန် - သင့်အခင်းအကျင်း။
နောင်လာမည့် WordPress ဖြန့်ချိရန်မျှော်လင့်သည်မှာဤ directory ၃ ခုသည် sub-directory များအစား root directory များဖြစ်သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်မှုဟာပိုမိုလွယ်ကူစေမှာပါ။ ဤအချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်သည် DNS ပြissueနာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးထို site အားမှန်ကန်စွာလမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့သည်။ ဝိုင် ယခု Pat ၏စာမျက်နှာသည် WordPress Upgrade သတင်းစကားတစ်ခုနှင့်အတူပြန်လာနေသည်။ ငါဒေတာဘေ့စကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်မှတစ်ဆင့်ကလစ်နှိပ်သူနီးပါး ... back up ဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါပြောတဲ့စာဝှက်စနစ်ပြissueနာကိုမှတ်မိသလား။ ဟုတ်ပါတယ်, ပတ်ပတ်လည်ကြောင့် Pat မဝင်နိုင်ပါ။ သူ၏စကားဝှက်သည်ဒေတာဘေ့စ်ရှိတန်ဖိုးကိုစနစ်တကျစာဝှက်ဖြည်ခြင်းမရှိတော့သဖြင့်ကျွန်ုပ်ထပ်မံပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ငါ database ထဲကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်ဝင်ပြီးအသုံးပြုသူစားပွဲပေါ်ရှိ Pat's reply email address ကို email address သို့ပြောင်းလိုက်သည်။ ထိုနောက်မိမိကိုယ်ပိုင်စကားဝှက်ကိုပြန်လည် reset လုပ်ရန် link တစ်ခုအီးမေးလ်ပို့ရန်“ Lost my Password” အင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ စကားဝှက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါ၊ ငါ log in လုပ်ပြီး Pat ရဲ့အီးမေးလ်ကိုပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်။
ယခုမှာ Pat ပြန်တက်လာပြီ! အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ၂၀ / ၂၀ ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ရှင်ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါကပြissueနာကိုဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ ငါတကယ်ကိစ္စကိုရှုပ်ထွေး။ သို့သော် Pat's သည်ယခုအခါအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာများ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်တော်သူစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်နေသည်။ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှပြန်ခုန်ထွက်ရန်အချိန်မကြာသော်လည်း၎င်းသည်အဆင်မပြေမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ တောင်းပန်ပါတယ်၊
Backup ကောင်းတဲ့ host နဲ့သင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။
အကယ်၍ သင်လိုအပ်လျှင် host အသစ် (သို့) အကောင့်အသစ်သို့သွားပြီးဆိုက်၊ ဒေတာဘေ့စ်ကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူမည်နှင့်သင်၏စကားဝှက်ကိုမည်သို့ပြန်လည်ရယူရမည်ကိုနားလည်ပါ။
ယနေ့ခေတ်တွင်မြန်ဆန်သောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအတွက်ဝယ်လိုအားများပြားလာသည်။ သေချာတာပေါ့၊ ဒီလှုပ်ရှားနေတဲ့အင်တာနက်လောကမှာ၊ ဂြိုလ်တုဖုန်း ၎င်း၏တန်ဖိုးရှိသက်သေပြခဲ့သည်။ ကြိုးမဲ့အင်တာနက်နှင့်ပတ်သက်လျှင်လူများသည်ရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်သည် ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုဘယ်လို အများကြီးသူတို့အဘို့အတန်ဖိုးထား။ အထူးသဖြင့် webmaster များအတွက်အရေးကြီးပုံ ကြိုးမဲ့ DSL နောက်တဖန်မမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်ဤ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများကိုကြိုက်သည် ဝဘ်ဒီဇိုင်းစတူဒီယို ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပြီးလျှင်မြန်သောမြန်နှုန်းမြင့်ဆက်သွယ်မှုကိုလိုအပ်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်ဤအစာရှောင်ခြင်းဆက်သွယ်မှုကိုလည်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်လိုအပ်သည် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ ရှိသူတစ် ဦး Microsoft အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ဤဆက်သွယ်မှုကွန်ယက်ရှိပြproblemsနာအားလုံးကိုအလွယ်တကူကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
Tags: wordpress ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး
Kiss သီအိုရီကောင်းသောနုတ်ဆက်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီငါးခု၏အကျင့်ဓလေ့များ
Borders များသည် 01 ရက်တွင်နေထိုင်သည်။ နယ်နမိတ်နှင့်အမေဇုံအီးမေးလ်စျေးကွက်